Topy maso / fitaovana amin'ny toeram-piasana | Ota Citizen's Plaza
Efitra fiofanana, tenisy fiara, tenisy ambony latabatra>
Afaka tsemboka mora foana ianao mba hanafoanana ny tsy fisian'ny fanatanjahan-tena sy ny endrika.
Ho an'ny tenisy fiara sy tenisy ambony latabatra, ny gymnasium dia hozaraina roa amin'ny andro voafaritra amin'ny herinandro, ary hapetraka ny milina tenisy fiara sy latabatra tenisy ambony latabatra mba hahafahanao manao fanazaran-tena tenisy sy latabatra.
Isaky ny alarobia, satria toerana fanaovana vaksiny io aretina vaovao io, mandra-pahatapitry ny asa fanaovana vaksinyTenisy fiara / tenisy ambony latabatraTsy misy. (Azo alaina isaky ny alatsinainy sy zoma.) Azafady mba zahao ity manaraka ity raha mila fotoana hampiasana an'io toerana io mba hisorohana ny fihanaky ny aretina coronavirus vaovao.
Sahabo ho 105.9 metatra toradroa
Tenisy fiara: olona 1 isaky ny milina (tsy azo soloina eo afovoany)
Tenisy latabatra ‡ ・ ・ Up ny olona 1 isaky ny singa
Fanatanjahan-tena aerobika / fiaretana cardiopulmonary
Treadmill: Labode LXE
Milina jogging: Labode LXS
Bisikileta: bisikileta tsy misy tariby V67Ri
Ampiofano ny tratranao iray manontolo: FUNASIS Chest Press
Ampiofano ny eo alohan'ny tratra: manidina FUNASIS
Ampiofano ny sorokao: FUNASIS lat pull-down
Ampiofano ny sandry roa (vatana ambony indrindra): FUNASIS multi-pulley
Ampiofano ny lamosinao: FUNASIS extension extension
Ampiofano ny kibonao: FUNASIS Crunch
Ampiofano ny sisinao: FUNASIS Rotary Toso & Twist
Ampiofano ny vatanao ambany: FUNASIS Leg Press & Calve Raise
Ampiofano ny lafiny ilan'ny tongotra: fanitarana ny tongotra FUNASIS
Ampiofano ny vodin'ny tongotrao: FUNASIS mipetaka amin'ny tongotra
Ampiofano ny ao anaty sy ivelan'ny feny: FUNASIS Addition & Abduction
Ny soroka sy ny lamosina: ny fanamboarana ny vatana II
Vatana ambony: Fanamboarana vatana II Rohy ambany
Ny saram-pampiasana trano sy ny saram-pampiasana fitaovana tsy ilaina ◆ Azafady mamela ny fifanakalozana.
Indray mandeha (tsy misy fe-potoana) 330
1 minitra isaky ny mandeha 330
1 ora isaky ny fiara isan'ora 330
Manomboka amin'ny 9:00 ka hatramin'ny 22:00 isan'andro.
* Ny fangatahana fampiasana dia hatramin'ny 21:00
* Ny fampiasana milina dia hatramin'ny 21:45
Tenisy fiara (singa 3)
Alatsinainy /水 曜 日(Sokajy 1 ka hatramin'ny 6)
Zoma (Sokajy 1-22)
* Isaky ny alarobia dia vaksiny miady amin'ny areti-mifindra coronavirus vaovao ny toerana, ka tsy azo ampiasaina mandra-pahatapitry ny asa fanaovana vaksiny.
Baolina latabatra (singa 5)
Alatsinainy /水 曜 日(Sokajy 1 ka hatramin'ny 3)
Zoma (Sokajy 1-11)
Fotoana tenisy fiara
Fotoana tenisy ambony latabatra
Azafady mividy tapakila amin'ny milina fivarotana tapakila amin'ny andro fampiasana ary mampihatra mivantana.
Hanomboka handray tenisy fiara sy tenisy ambony latabatra isika 30 minitra alohan'ny sokajy tsirairay (1 minitra alohan'ny sokajy voalohany ihany), ary hanaiky ny sokajy manaraka raha vantany vao feno izany.
Misy efitrano fiofanana amin'ny fotoana rehetra.
Misy efitrano fanovana (trano fandroana, hidin-trano, fitoeran-kiraro) azo alaina koa.Ampiasao amin'ny fotoana be dia be azafady.
Rehefa mampiasa ny efitrano fanazaran-tena na tenisy ambony latabatra dia miangavy mba hitondra kiraro atletisma anaty trano.
Rehefa mampiasa tenisy fiara, azafady mitondra raketa tenisy sy kiraro tenisy (hampiasaina anaty trano).
Misy "efitrano fiofanana, tenisy fiara, tapakila iraisana amin'ny tennis".
Hanazava ny fomba fampiasana ireo fitaovana ireo ny mpiasa.
Ny mpianatra amin'ny ambaratonga voalohany sy ny tanora dia tsy afaka mampiasa izany, fa ny tenisy fiara sy ny tenisy ambony latabatra dia tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny kilasy faha-5 sy faha-6 amin'ny sekoly ambaratonga voalohany raha miaraka amina mpiambina iray.
Ny tapakilan'ny fijanonana dia tsy azo omena.